काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! आयो यस्तो नियम कारबाहीमा परियाला ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! आयो यस्तो नियम कारबाहीमा परियाला ?
काठमाडौं उपत्यकामा तपाईं तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार! अब महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यसरी गाडी हाँक्नेविरूद्ध रातिमा पनि कारबाही सुरू गरेको छ। रातको समयमा तीव्र गतिमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना बढ्न सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै महाशाखाले ‘नाइट भिजन लेजर स्पिड गन’को प्रयोग गरी जाँच अभियान थालेको हो।
उनले आज रातिदेखि नै नाइट भिजन लेजर स्पिड गनको प्रयोग सुरू गरेको र यसले तीव्र गति नियन्त्रणका साथै रातको समयमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। उक्त अभियानकै समयमा स्पिड गन प्रयोगमा ल्याएकै दिन सातदोबाटो, ग्वार्को क्षेत्रमा ओभर स्पिडमा सवारी चलाउने सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाले लापरबाहीका साथ सवारी नचलाउन सवारी चालकलाई अनुरोध पनि गरेको छ। रासस
दिनभरी अर्कै केटा संग सु;तेर आउथि राति एकलै सुत्थी – कस्ति नारि . एस्तोलाइ के भन्नु हुन्छ?
जब नयाँ बर्षमा होटल पुगेका युगल जोडीका बाबु आमा पछि-पछि पुगेर रंगेहात समाते